Abacwaningi be-Amazon abadayisi bangasiza kanjani ukuthuthukisa ibhizinisi lami?
Wake wazibuza ukuthi kungani udinga ukuqhuba ucwaningo lwama-Amazon? Kuyinto umsebenzi ewusizo Amazon iningi lethu abazi. Eqinisweni, ucwaningo lwama-Amazon lungabasiza kokubili amakhasimende nabathengisi. Kulesi post esincane, sizoxoxa ngamandla we-Amazon umthengisi ucwaningo futhi sihlolisise amanye amacebo okusebenza okubalulekile angakusiza ukuba ukhulise ukuthengisa kwakho futhi uphakamise ukwaziswa komkhiqizo wakho.
Indlela yokuqhuba ucwaningo lwama-Amazon?
Akukhathaleki ukuthi yiziphi izinto ongathanda ukuzenza; uqinisekile ukuthi uyayithola phakathi kwekhasi lemikhiqizo engapheli ekuthengisweni kwe-Amazon. Lapha awukwazi ukubona kuphela imikhiqizo ethengiswayo futhi igcwaliswe ngabadayisi kodwa futhi nezinye eziningi ezinikezwe abathengisi abangaphezu kwezigidi ezimbili zabanye. Ukusebenzisa ikusasa le-Amazon elizayo, ungaqhuba ucwaningo lwama-Amazon futhi uthole laba abathengisi ngabanye ngendlela efanayo uma uthola noma yikuphi okuqukethwe kusayithi. Ngaphezu kwalokho, ungadlulisa amehlo ngeminyango lapho imikhiqizo yomdayisi ithengiswa khona futhi uthole umthengisi oyidingayo kusigaba sesokunxele.
Ukusesha kwe-Amazon kuklanyelwe ngokukhethekile ukunciphisa usesho lwakho ngokusebenzisa imibuzo ehlukahlukene ejwayelekile neyodwa. Ihlanganisa amagama omkhiqizo, imibala, namagama omthengisi. Uma ungathanda ukubambisana nabathengisi ababonakalayo, udinga ukucinga uphawu lweenkampani okufanele lubekwe phezulu emiphumeleni yosesho futhi ungachofoza ukuze ufake isitolo sangaphambili sesitolo. Ukuze uthole umdayisi ovamile, kufanele umane ukhethe omunye wemikhiqizo ehlisiwe bese uchofoza igama lomthengisi kulolu hlu lomkhiqizo ukuthi luqondiswe ekhasini lomthengisi.
Ngaphezu kwalokho, i-Amazon inikeza uhlu lwezinhlamvu zama-alfabhethi lwabahwebi emnyangweni ngamunye. Lapha ungathola umqondo jikelele wegama lomthengisi. Ukuze uthole uhlu lwabasomabhizinisi, udinga ukuchofoza "umsebenzi wesitolo". Ibeka ekhoneni eliphezulu lesobunxele lamakhasi omkhiqizo namakhasi wesigaba. Ukuze uthole imiphumela enembile, kufanele unciphise umbuzo wakho.
Ukuhlola ukudayiswa kwe-Amazon
Imibuzo ye-URL yekhasimende
Wake wazibuza ukuthi i-Amazon isebenzisa kanjani imibuzo ye-URL imiphumela yokusesha nokuthi ungazuza kanjani kuso? Ama-URL we-Amazon angathinta kakhulu ukufakwa kuhlu kwakho kokufakwa ohlwini uma uwasebenzisa ngendlela efanele.
i-URL ye-Amazon iqukethe izingxenye ezilandelayo - & namagama angukhiye = inhlamvu yamagama angukhiye isistimu yokusesha isebenzisa ukufanisa umbuzo womsebenzisi kanye nomphumela wosesho. Ingxenye yokuqala ye-URL ngayinye ye-Amazon ibukeka njenge- "/ s / url = search-alias" futhi isebenza ukuhlunga imiphumela yi-best-sellers.
Yingakho ukugqugquzela ikhasi lakho bese uletha isikhundla esiphezulu; kufanele uhlubule i-URL phansi kwalokhu:
https://www.amazon.com/s/?url=sesha-alias&field-keywords="a string of keywords. "
Uma uchofoza umkhiqizo ovela ekhasini lokusesha, ungaphinda ubone i-URL ende futhi engacacile. Kungabuye kuthuthukiswe ukukuletha isikhundla esiphakeme. Udinga ukufaka amagama akho angukhiye e-URL ukuze wenze imikhiqizo yakho ibonakale ku-SERP. Ungenza ukuzama ukuthola izinhlanganisela ezithile zezintambo ze-URL eziletha ikhasi ofuna ukulibona.
Isici esibalulekile engidinga ukukusho ukuthi udinga ukusebenzisa uhlamvu "& 20" esikhundleni sohlamvu "+" ukuze uhlukanise amagama akho okusesha ku-URL ye-Amazon Source .